Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Sheegay In Turkigu uu Tirtiri Doono Daacish.
Trump oo Sheegay In Turkigu uu Tirtiri Doono Daacish.
Posted by Dayr	/ December 25, 2018
Donald Trump yaa sheegya in Turkey ay tirtiri doonto mintidiinta kooxda Daacish ee ku hadhay dalka Suuriya kadib marka milatariga Mareykanka ay kasoo baxaan dalkaas.
Qoraal uu xilli dambe oo axaddii ah soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa Trump waxa uu ku yiri “Madaxweyne Erdogan waxa uu si xooggan iigu war-geliyey in uu baabi’in doono wixii Daacish ah ee ku hadhay dalka Suuriya…waana nin awooda inuu sameeyo, waxaa taas dheer in Turkiga deris la yihiin Suuriya” “Ciidamadayadu way soo guryo noqonayaan” ayuu Trump sii raaciyey.
Trump ayaa goor sii horeysay sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka uga baxayaan dalka Suuriya kadib wada-hadal dheer oo midho-dhal ahaa oo ay ku yeesheen taleefonka.
Trump ayaan bixinin faah faahin buuxda oo ku saabsan wada-hadallada uu la yeeshey Erdogan hase yeeshee waxa uu tweet gareeyey inay ka wada hadleen Daacish, ganacsiga iyo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya.
Trump ayaa 19-kii bishan si lama filaan ah ugu dhowaaqay go’aan ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalka Syria. Aqalka Cad ayaa difaacay go’aanka Trump, hase yeeshee ma sheegin sababta keentay in lagu dhawaaqo go’aankan iyo in guul laga gaadhay kooxda Daacish.
Go’aankan oo si lama filaan ah ay uga war-heleen saraakiisha difaaca, diblomaasiyiinta iyo sharci-dejiyeyaasha Mareykanka, ayaa Trump waxa uu ku shaaciyey qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka uu ku leeyahay oo inta badan uu go’aamadiisa ku shaaciyo.